हाम्रो चेतना - यो साँच्चै अज्ञात कुरा हो! यो सबै रहस्यहरुलाई को रहस्य छ! तर तपाईं केहि को सपना चूहों, मलको, मृत, सर्प, संगीत Stasa Mihaylova मन र यति .. मा अनि अर्को बिहान हामी संग कुस्ती सुरु: एक समय वा अर्को सपना सपना देख्यो छ के? उदाहरणका लागि, तपाईं लाग्छ, के सपना चिहान? यस्तो भयावह र depressing, उदास सपना राम्रो वा केही sinister कुरा portend गर्न सक्नुहुन्छ? गरेको मनोविज्ञान र आध्यात्मिकता को दृश्य को बिन्दुबाट यो हेरौं।
Millerovskiy सपना व्याख्या: के चिहान सपना
वैज्ञानिक-मनोवैज्ञानिक थर मिलर तपाईंले धूमिल सपना भने, तर एकै समयमा शान्त ठाउँ, यो मृत्युको आफ्नो अवचेतन डर देखाउँछ भनेर भन्छन्। तथ्याङ्क अनुसार, उनि आफ्नो अन्त को डर, निरन्तर जीवनको अर्थ बारे सोच भएकाहरूलाई हेर्न यी चित्रहरू को सबै भन्दा ... यो एक पीडारहित हेरविचार सामान्य को विचार, गुस्ताव मिलर हामीलाई सपना को निम्न अस्पष्ट व्याख्या दिन्छ:
यसलाई अर्थ केही नजिक मिति सक्नुहुन्छ;
सायद आफ्नो प्रियजनलाई को जीवनलाई खतरा नजिकै;
सपना यो आफ्नो पापको पश्चात्ताप गर्न समय छ भनेर संकेत गर्छ हुन सक्छ।
खैर, यो कवि Yesenin अक्सर ", लुपमा ओर्लन्छन्" स्पष्ट आत्महत्या मनसाय केही कविता को लेखन को लागि उसलाई "खाना" दिनुभएको (एक सपना जस्तै भोगे वा "neobmytogo गाडे" भन्ने भने र यति मा)।
चिहान किन सपना, आधुनिक मनोविज्ञान र आध्यात्मिकता अनुसार
आज मनोवैज्ञानिक भन्न यस्तो सपना कि "घण्टी" को एक प्रकारको छन्। हाम्रो शरीर हामीलाई यो धेरै थकित छ कि एक संकेत पठाउँछ भन्ने तथ्यलाई उहाँले राम्रो बाँकी आवश्यक छ। कि माथि तपाईं र शक्ति हाम्रो आभा को वर्ण बनाउन ती नैतिक सेना - दृश्य यस बिन्दु यस्तो संकेत हाम्रो आफ्नै आत्मा पठाइएका छन् कि थपियो गर्ने esotericism, साथ दिए।
यसलाई के मतलब चिहान को जब सपना गर्छ? राय parapsychologists
जो जो गर्न चिहान सपना, तिनीहरूले हाम्रो आफ्नै अवचेतन हामी एक पटक आफ्नो चिन्ह (मार्क) बायाँ जहाँ स्थानहरू हामीलाई जान्छ भनेर भन्न कि वैज्ञानिक substantiation लागि देख थिए वैज्ञानिकहरू (psychics), अर्को समूह! अर्को गम्भीर, namusorit र यति मा सानो वा ठूलो आवश्यकता मनाउन - उदाहरणका लागि, हामी खराब, केही बर्बरता को एक कार्य resembling कि चिहान बनाउन सक्छ। अब हामी सपना मा पठाउन सम्झाउने छ पश्चात्ताप र पीडादायी अनुभव ... अन्तस्करणले हामीलाई आराम दिन छैन। सबै भन्दा राम्रो तरिका यस्तो सास्ती छुटकारा प्राप्त - चर्च जानुहोस् र त्यहाँ एक प्रार्थना पुस्तक हो।
खैर, यो सल्लाह उहाँले मरेका कसैलाई को सम्बन्ध मा गलत थियो भनेर पहिले नै बुझे भएकाहरूलाई मानिसहरूलाई मदत गर्नेछ। तिनीहरूले भन्न रूपमा कहिल्यै ढिलो पश्चात्ताप गर्न! यो तपाईं आफ्नो गम्भीर वा मृतक प्रार्थना सम्मानको आदेश मन्दिर, यो के गर्न सक्नुहुन्छ त मरेको असम्भव छ देखि, क्षमा सोध्न भनेर स्पष्ट छ।
किन चिहान, जो मानिसहरू प्रेममा हिड्ने थिए को सपना?
ओह, यो एक धेरै खराब सपना छ! आफ्नो विवाह कहिल्यै हुनेछ, र यो ठाउँ लिन्छ भने, त्यसपछि तिमी धेरै दुखी विवाह, जो चाँडै बिखर हुनेछ! तथापि, वैज्ञानिकहरूले र मनोवैज्ञानिक जवानहरूले soothe। तिनीहरूले किनभने पूर्व-विवाह अन्धविश्वासको रूपमा विश्व नै पुरानो हो हामी, त्यसैले सपना मा धेरै विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर भन्न! र सपना तिनीहरूलाई टाढा गएका छन्। यो कुरा छ, दुलही र दुलहा मन, निकास पूर्व-विवाह घरधन्दा कि, सपनामा बाहिर निकाल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो "ऊर्जा", त्यहाँ सबैभन्दा विविध र अचम्मको तस्वीर चित्रकला छ! नडरा र हुन छैन एक मौलिक डर! आफ्नो निर्णय परिवार सुरु गर्न भने - एक निष्कपट, त्यसपछि सबै नहुनु विरुद्ध उहाँको पछि!
आफ्नो निद्रामा बकवास हेर्नुहोस्: यो के हो?
किन चेरी को सपना: बताउन sonnik
क्यूब वजन कसरी निर्धारण गर्छ
CASCO चोरी: सम्भव कठिनाइ
बढ्दै chrysanthemums बाहिरी: सिफारिसहरू